Akuzona zonke izilwanyana ezinezinyawo ezine ezihamba kulo mpilo ukuthola abanikazi bekhaya nabanothando. Izitaladi zedolobha zigcwele abantu abangenamakhaya, bashiyelwe ekupheleni kwezilwane: abanakho indawo yokuya kuyo, ngoba akekho ozokwenza. Izinja ezinjalo, ezingadingekile futhi ezingathandeki kunoma ubani, zivame ukulahleka emaphaketheni enonya, zizama okungenani ngandlela-thile ukuba zisinde ezweni lethu elinonya. Njengoba ingoma ithi, "Inja ibetha kuphela empilweni yenja." Futhi kunjalo ngempela. Enye yezindlela zokulwa nenkinga yezinja ezilahlekile yilapho kudalwa izindawo zokukhosela.
Kwakungenwe nini indawo yokugcina indawo?
Umkhuba wokwakha izindawo zokuhlala izinja ezilahlekile kuye kwaziwa kusukela ngo-1695 - kwaba ngaleso sikhathi ukuthi owokuqala wabo wadalwa eJapane. Ezweni lakithi, okuhlangenwe nakho kule ndawo, akunjalo, akuyona into enhle kakhulu, kodwa kuyajabulisa ukubona ukuthi namuhla cishe kuwo wonke amadolobha kunezikhungo ezifanayo.
Yimiphi imisebenzi yamakhaya okuhlala izilwane ezingenamakhaya?
Inja yokuhlala ingenye yezingxenye eziyinhloko ekuvikelweni kwezilwane. Njengomthetho, izikhungo zalolu hlelo zidalwa ukuze zinikeze imisebenzi efana nalezi:
Ukunakekela ukunakekelwa kwezilwane nokusebenza kwezilwane.
Sesha umnikazi nendlu yenja.
Ukuhlangana kabusha kwesilwane nomnikazi wangaphambilini uma isilwane sishaywa noma sebiwe.
Kubalulekile ukuhlukanisa phakathi kwezinhlobo ezimbili zokukhosela: omasipala nabangasese.
Izimali zikaMasipala zixhaswa ngemali evela kwisabelomali sombuso, izilwane ezithatha izilwane zenziwa ngokuhleleka-kanye nezinhlangano ezikhethekile. Ukwakhiwa kwezikhungo ezinjalo okwamanje kusencane, ingxenye encane nje kuphela iseduze nendawo ekahle, kodwa ayikho into ehambisana nayo. Kunezikhalazo eziningi mayelana nomsebenzi wamakhaya okuhlala, ukuntuleka kwezimali kungenye yezinkinga eziyinkimbinkimbi kakhulu. Yingakho izilwane ezilahlekile zixhasiwe yizakhamizi, abathandi babo abanezinyawo ezine abavumeli ukuhlala bengenandaba.
Izindlu zokuhlala ezizimele zidalwa ngabanye ngezindleko zabo. Kulezi zindawo zokuhlala zivame ukuphakama imibuzo eminingi, njengoba iningi lazo futhi liphikisana ngokuphelele nezihloko zomthetho, kodwa futhi zihambisana nemigomo yokuziphatha. Yiqiniso, kunezikhungo eziningi ezisemthethweni, lapho izinja namakati banikezwa ukunakekelwa kwezilwane ezifanelekayo nokunakekela. Njengamahholo omasipala, izimpahla ezizimele azikwazi ukuhlala ngaphandle kokusekelwa izisebenzi zokuvolontiya - izakhamizi eziqaphelayo, ukulungele ukusiza izilwane ngaphandle kwenxephezelo.
Ingabe kukhona izindawo zokukhosela izinja ezilahlekile eYekaterinburg?
Yiqiniso, idolobha laseYekaterinburg akuyona into ehlukile kule ndaba. Uma unesifiso sokuthatha inja endaweni yokukhosela e-Yekaterinburg, lokhu ngeke kube yinkinga. Kulo muzi namuhla kunezikhungo ezingaphezu kwesisodwa sosizo ezifuywayo ezilahliwe. Uma ngabe ufisa, noma ubani ohlala edolobheni angakwazi ukuvakashela ngokukhululekile izakhiwo zokuhlala ezinja eYekaterinburg, ulethe ukudla nezidakamizwa ezilwaneni ezingenasidingo, anikeze uthando nokukhathalela, futhi anakekele othandekayo esikhungweni uma kungenakwenzeka ukumthatha ekhaya.
Izindlu zezinja eYekaterinburg. Amakheli
Njengoba kushiwo ngaphambili, cishe wonke amadolobha ezweni lethu elikhulu anendawo yokukhosela izinja. EYekaterinburg, kunezikhungo zokusiza izilwane ezingenamakhaya, okuholela ekusakazeni isimo sengqondo sokuzibophezela izinja, kanye nokusiza izilwane ezifuywayo ezinenkinga. Izikhungo ezinjalo ziyi:
1. Isikhwama "Ukuchithwa".
Ikheli: Ekaterinburg, ul. U-Amundsen, u-105.
Ifoni yokuxhumana: 8- (343) -212-57-52.
Le nhlangano yasesidlangalaleni yasungulwa ngenhloso yokusiza labo abacindezelekile noma abahamba ngezinyawo eminyakeni eyishumi eyedlule. Isisekelo sesikhwama, okokuqala, isinyathelo sezakhamizi zaseYekaterinburg, ezingenandaba nokuphela kwezilwane. Idalwe iqembu labantu eminyakeni eminingi edlule, namhlanje yinhlangano enhle kakhulu, noma ubani angajoyina ukuba ahlanganyele emsebenzini wakhe.
Izinhloso eziyinhloko zalesi sikhwama yizo:
Ukuhlinzeka ngosizo lwezokwelapha.
Ukusiza izakhamuzi ezihlangabezane nokuhlukunyezwa kwesilwane (izishoshovu zingavakashela indlu).
Ukwakhiwa kwesisekelo esihlanganisiwe sezilwane ezilahlekile nezitholakalayo.
Sesha izinja namakati abanjwe.
Ukuhlinzekwa ngemithi nokuphakelayo.
2. Ukulondolozwa kwesikhashana kwezilwane.
Ikheli: Ekaterinburg, ul. I-Posadskaya, 3.
Ifoni yokuxhumana: 8- (904) -170-24-44.
Le ndawo yokuhlala izinja ezilahlekile eYekaterinburg ibheka umsebenzi wayo oyinhloko ukuqinisekisa ukugcinwa kwesikhashana kwezetrapods ezingenamakhaya. Isikhathi esisemthethweni sokuhlala kwe-mongrel kule nandlu yintsuku ezingu-21. Kodwa-ke, ngokuvamile isilwane sihlala khona kuze kube sekupheleni, kuze kube yilapho omunye wabanikazi abanakho engakhetha ukumnika indlu.
Wonke umuntu ofuna ukuthola isilwane angakwazi ukufika endaweni eqondile bese ethatha isifiso. Ukukhethwa kwezinja kuyinkulu: kule nandane iqoqwa abangane abahlukene kakhulu abanezintambo ezine, kusukela kuzo zonke ubudala nobukhulu, imibala nabalingiswa. Ngamunye wabo udinga i-caress, ukunakekelwa, uthando nokududuzeka.
3. Isikhwama se-Charity sokusiza izilwane ezingenamakhaya.
Isikhwama asinalo ikheli elithile. Iqiniso liwukuthi izinja ziphezu kwamandla amaningi. Kukhona inhlangano ekhokhelwa izishoshovu, izisebenzi zokuzithandela kanye nezakhamizi ezingenandaba. Noma ubani angathintana nomqondisi wesikhwama futhi anikeze konke okusemandleni ukudla noma imali.
Esikhathini esikhwameni, ungaphinde unikeze isilwane sakho, uma kungazelelwe izimo zikushiye ngaphandle kokuphuma.
4. Indawo yokuhlala yase-Inthanethi "Ngizoyithola indlu".
Indawo yokukhosela iqukethe izinja kuzo zonke ukunambitheka: amantombazane nabantu abadala, i-thoroughback ne-mongrel. Le phrojekthi ayigcini nje kuphela i-Yekaterinburg, kodwa iphinde iqondise umhlangano wabantu abangaba khona nezilwane ezifuywayo emadolobheni aseMoscow, eSt. Petersburg naseNizhny Novgorod.
Ngingayithola yini inja ephelele evela endaweni yokukhosela?
Izinja ezihamba ngezinyawo ezisuka ezintandane njengesipho (Ekaterinburg) - kungenzeka? Yebo, yebo! Ngeshwa, kwenzeka ukuthi emgwaqweni ngenxa yezizathu ezithile noma enye akukhona nje kuphela ama-mongrels asendabuko, kodwa futhi futhi, izinja ezigqamile. Omunye ulahlekile, othile uphahlaza nabantu abahlazekayo, umuntu ophunyuka empilweni enhle evela kubanikazi bakhe bangaphambilini. Ukuphendukela kunoma iyiphi indawo yokukhosela, ungacacisa ukuthi kukhona khona izinja ezihamba phambili, futhi uma zitholakalayo okwamanje, thatha isilwane sakho ngokuphelele mahhala.
Akekho okhetha ukuthi ubani ozozalwa nokuthi kuphi, kodwa wonke umuntu unelungelo lokujabula futhi ikhaya elihle. Woza ezindaweni zokukhosela izinja eYekaterinburg. Thatha isilwane - futhi ngeke uthole kuphela umngane othembekile, othembekile, kodwa nenjabulo, injabulo nokungenamkhawulo okuhle ekukhulumeni nesilwane.
Amakati akhula kangakanani? Amakati akhula isikhathi esingakanani?
Border Collie. I-Border Collies yizingane. I-Border Collie - incazelo yezohlobo
Ukudla okuyi-hypoallergenic izinja: ukudla okunomsoco ezingeni eliphezulu kakhulu
Ukudla okufanele: ama-oatmeal fritters
UMongameli Uruguay Hose Muhika
Izihloko eyenziwe ezimoto - engadini umhlobiso
Casio CDP 130: izibuyekezo Amaphiyano